ဂေဇတ်ရွာအလှူတွင် အလိမ်မခံရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ဂေဇတ်ရွာအလှူတွင် အလိမ်မခံရအောင်
Posted by phone_kyaw on Jan 10, 2012 in Complaint / Claim, Ideas & Plans | 38 comments
တလောက အိတုံက ဦးဆောင်ပြီး ဂေဇတ်စုပေါင်းအလှူ လုပ်မယ်လို့ ပြောတော့ သာဓုခေါ်ရမယ်လို့ ဆိုချင်တယ်။ ပြီးရင် နာရေးကူညီမှူအသင်းကိုလှူမယ်ပေါ့။ အိုင်ဒီယာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်လည်း လှူ ပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက လှူတဲ့သူတွေကလှူပြီး ပိုက်ဆံတွေကို ဘတ် သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ယုံကြည်အောင် ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားကြလဲမသိဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခဏခဏ အလိမ်ခံနေရတာဆိုတော့ လှူတော့လှူချင်တယ် ဒါပေမဲ့ မယုံရဲဘူးဖြစ်နေလို့ ပါ။ ဆိုတော့ လှူတဲ့သူတွေ ယုံကြည်အောင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားကြလဲဆိုတာ ပြောစေချင်တယ်။
အဲ .. ခေါင်းစဉ်ဖတ်မိပြီး ခေါင်းကြီးသွားရုံတင်မကပဲ … အနားရှိလျှင် ဆံပင်ဆွဲ ၊ လည်ပင်းတောင် ထညှစ်မိတော့မယ် …။ :mad:
AKKO ၊ရွှေတိုက်စိုး နဲ့ လေးပေါက်တို့က တရားချထားလို့ စိတ်မြန်တဲ့အကျင့်၊ ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ အကျင့် ၊ ကိုဖြောက်နေတုန်း … ဆောက်နဲ့ လာထွင်းနေပြန်ပလားဗျို့ …. ။
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတော့ သိပ်မရှင်းပြချင်ဘူး … အရှင်းဆုံးပြောရလျှင် ယုံကြည်တဲ့ လူတွေ လှူလိမ့်မယ် .. မယုံကြည်တဲ့ လူတွေ မလှူနဲ့ … ဒါပဲ … ။ နှိုးဆော်တာပဲ ရှိတာ .. တအိမ်တက် တအိမ်ဆင်း သူတောင်းစားလို ခွက်ကိုင်ပြီး အိမ်ပေါက်ဝလိုက်ရပ်နေတာမဟုတ်တာတော့ သတိရစေချင်တယ် ။
ဒီမှာ ကိုဘုန်းကျော် လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းမနေပါနဲ့ … ဖျံကျမှ သာမယ့် နိုင်ငံကလူတွေကြားထဲရောက်နေလို့ ရှင့်မှာ ဒီလို စိတ်ရှိတာ အံ့သြလောက်ပါရဲ့ …. ။ သူများတွေ ကောင်းမှု ကုသိုလ် လိုက်လုပ်နေတာကို … ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးများ ဒီလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိပါလိမ့် .. အံ့သြလိုက်တာ အရမ်းပါပဲ … ။ ကျွန်မတို့က ပိုက်ဆံတွေဘတ်သွားရအောင် ဒီလောက်ပိုက်ဆံနဲ့ … တစ်သက်လုံး သူများနိုင်ငံသွားပြီး ကျွန်လုပ်ဖို့ … အရင်းနှီးများရပြီထင်သလား ။
ကျွန်မတို့ စိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံထက် ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ သီလကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတယ် ….. ။
ဒီအလှူကို မစခင်ကတည်းက စိတ်ထဲမှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစွာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တယောက် အချိတ်ဆက်မိမိတိုင်ပင်ထားကြတယ် … ။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း အလှူငွေ ကောက်ခံမှု လက်တလော အခြေနေဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အီးမေးလ်ကို အလှူရှင် မန်ဘာတွေ နဲ့ သဂျီးကို ပို့ပေးတယ် … ။
အလှူရှင်စာရင်းကို ပို့စ်အနေနဲ့ မတင်ရတာက … အလှူရန်တိုက်ပေးသလို ဖြစ်နေမှာစိုးတာကြောင့်ပါပဲ … ။
ကိုဘုန်းကျော် သေချာမှတ်ထားပါ …. နောက်ထပ်မပြောဘူး …
လှူချင်လျှင် လှူ … မလှူချင်လျှင်နေ …. လာလာညှော်မနေနဲ့ … ။
သားသားက မမရဲ့ ပူရိသတစ်ဦးပါခင်ဗျ
သီးထန်စွာခံ ( စား ) ခြင်း
သိ ( ၍ ) ခံခြင်း
သိ ( ပြီး ) မှခံခြင်း
သိ ( လို့ ) ခံခြင်းဆိုပြီး အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ စုံလင်အောင်ရှိလှပါတယ်ခင်
အရှင်မောဂ္ဂလန် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး နဂါးကြီး ( တရုပ်နဂါးမဟုတ်ပါ ) အသွင်ဖန်ဆင်းပြီး
( အရိယာတို့၏ ဖန်ဆင်းသည် ဆိုရာဝယ် ( စာရေးဆရာမ ခင်မမမျိုးလေသံဖြင့် )
ဟန်ဆောင်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ သုံးစွဲတတ်သည်ကို ကြီးစွာ သတိပြုကြကုန်စေသောဝ် )
နန္ဒောပန န္တ နဂါးကြီးကို ခုနစ်ပတ်ကြီးများတောင် ညှစ်ပြီးဆုံးမခဲ့တာပါဘဲ
သစ္စကဗရပိုက် ကိုဆိုရင် သိကြားမင်းက ဘီလူးကြီး ( ဂေဇက် ဘီလူးကြီးမဟုတ်ပါ )
ဒါ့ကြောင့် မမအိတုံအနေနှင့် ငြိမ်မခံပါနှင့်ခင်ဗျ
ပူရိသ ဟု ရေးသားထားခြင်းအား
မြန်မာ့မီးရထား၏ လက်အောက်ခံ သံလမ်းဂုဏ်ပဏီ၏ အောက်ခြေလုပ်ငန်းခွဲ
— ကိုဘုန်းကျော် တကယ်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်လှူမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သွားယူ ..
သွားလှူပြီး … အထောက်အထား ၊ ဓါတ်ပုံ ၊ နောက်ဆုံး ကိုကျော်သူ့ လက်မှတ်နဲ့ တကွ အီးမေး ပြန်ပို့ပေးပါ့မယ် …
ကိုဘုန်းကျော် ဘယ်လောက်လှူမှာလဲ … နဲနဲပါးပါးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ…
ကျွန်တော့်သွားယူ ပြန်ပို့ရမယ့် စားရိတ်က အကို့ အလှူငွေထက် ပိုများနေမှာ စိုးလို့ပါ …
အကို့ငွေကို တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မထိပါဘူးနော် ….
ကိုယ့်စားရိတ်ကိုယ်စား ခင်ဗျားကို ပါရမီ ဖြည့်မှာပါ ..
ကဲပြော ၁၀ သိန်းလား သိန်း ၂၀ လားအကို …
ကုသိုလ်ရေးလုပ်တာကနေ အကုသိုလ် ဖြစ်သွားရင်
ကိုဘုန်းကျော်အနေနဲ့ ဒီလိုကိစ္စတွေကို မေးချင်ရင်
ဖုန်းနံပတ်တွေရယ် ပီအမ်မ်တွေကနေ မေးလည်း ရတာပါပဲဗျာ။
သူကြီး လည်း ရှိနေတာ၊ စိတ်မချရင် သူကြီးကို ပီအမ် ကလှမ်းမေးပေါ့ဗျာ။
ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေသူတွေကို စော်ကားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်
ဒါ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လိုက်ကောက်နေတဲ့ ရပ်ကွက်အလှူမဟုတ်ပါဘူး။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တရားဝင် ကြေငြာပြီး လုပ်နေတဲ့
တာဝန်ကြီးတဲ့ အလှူ ကိစ္စပါ။
သူတို့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ရင်းပြီး လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာ
ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီလို negative အပြောအဆိုမျိုးပြောတာတော့
ကျနော်အဲလိုပြောရင် ခင်ဗျားတို့ စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတာ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောတာက ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ခံနိုင်မှု နဲ့ လိမ်လို့ မရတဲ့ စနစ်ကိုပြောနေတာ။ တစ်ဦးချင်း ဘတ်တာ လိမ်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ အိတုံပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင် လှူချင်တဲ့စိတ်တောင် ကုန်သွားတယ်။ ကိုယ်က ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေတာဆိုတော့ အလုပ်ဖြစ်အောင် ဒိထက်ပိုပြီးအောင်မြင်လာအောင် လှူချင်လှူမလှူချင်နေ ဆိုပြီး လုပ်တာတော့မကောင်းဘူး။ ကျနော်နဲ့ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့ သိပါတယ်။ ကိုယ့်မောင်နှမတွေကို ပိုက်ဆံသွားယူပြီးခိုင်းပြီးလှူလည်း ရတယ်။ အဓိက ခင်ဗျားတို့ နဲ့ ပေါင်းပြီးလှူတာဆိုတာက ခင်ဗျားတို့ စိတ်ဓာတ်ကို သဘောကြလို့ ။ ဒါ့ကြောင့်အားပေးတာပဲ။ သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး ကိုယ်နဲ့ တစ်ခါမှ မသိတဲ့သူတွေလှူချင်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုးစည်းရုံးရမယ်ဆိုတာကို တွေးစေချင်တယ်။ ဘာမဆိုင်းညာမဆိုင် တစ်ချိန်လုံးရန်ဖြစ်ချင်နေလားမသိဘူး။ ဒီလိုလုပ်။ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့ ထဲမှာ လူလေးစားတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ လူတစ်ဦးဦးကို နာယကလို ဦးဆောင်သူလိုထည့်ထား။ ဥပမာ အဆိုတော်လေးဖြူက နာယကပါဆိုပြီးလုပ်ပေါ့။ ဥပမာ လူထု ဦးစိန်ဝင်း။ အိတုံက နာမည်ကြီး လူလေးစားရတဲ့လူမှ မဟုတ်တော့ ဘယ်သူက ယုံမှာတုန်း။
သူများနိုင်ငံမှာ အနေကြာနေလို့ ဘယ်လို စိတ်တွေဝင်နေလဲတော့မသိပေမယ့် … ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြက်ချေးအရောမခံနိုင်လို့ ပြန်ပြောဦးမယ် … ။
ကျွန်မတို့အလှူလုပ်ဖို့ ယုံကြည်မှုနဲ့ စေတနာ ထပ်တူချပြီးလုပ်နေကြတာ … ဘယ်နာမည်ကြီး ဆလဗရက်တီရဲ့ အရှိန်ဝါကို ယူပြီး မျောက်ပြ ဆန်တောင်းတာမဟုတ်ဘူး ။
ရှင်အနေနဲ့ကတော့ တစိမ်းတွေလို ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ … လေလှိုင်းထဲမှာတင် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရပြီး အပြင်မှာပါ ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံနေကြတဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့တွေကတော့ တစိမ်းမဟုတ်တော့ဘူး ။
ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းတာနဲ့လုပ်ပြီးပဲ အလှူခံပါတယ် .. ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်ပြောပြီး ညောင်စေ့လောက်လှူပေမယ့် ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရမယ် လို့ ချဲ့ကားမပြောတတ်ဘူး …. ။
ဒီလိုပဲ … ချော့ပြီးလည်း အလှူမခံဘူး ၊ မြှောက်ပြီးလည်းအလှူမခံဘူး … ခြောက်ပြီးလည်း အလှူမခံဘူး … ။ စေတနာအလျှောက်လှူတာကိုပဲ တန်ဖိုးထားလက်ခံတယ် … ။
ရန်ဖြစ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး …. အမှန်တရားကိုတန်ဖိုးထားပြီး ၊ မဟုတ်လျှင် ငြိမ်မခံတတ်လို့ ပြန်ပြောနေရတာ ….
အသက်ကြီးပြီး အချိန်စီးအောင် ကျောက်ပျဉ်ရွက်ထားဗျို့ … ။
ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့သိလဲကိုယ်တိုင်သွားလှု။ ကြွားမနေနဲ့။ အိတုန်မို့အလှုငွေထည့်မယ်။ ခင်ဗျားဆိုရင်အလှုငွေထည့်ဖို့ဝေးလို့အိမ်တံခါးတောင်ဖွင့်မပေးဘူး။ အိတုန်သူ့ကိုအလှုမခံနဲ့။ ထည့်တာနဲ့မကာမိပဲအပြောခံရလိမ့်မယ်။ ကိုဘုန်းကျော်————-ရှင်တော့တော်တော်မလွယ်တဲ့လူပဲ။ ရှင်တို့လုပ်စားဖူးလို့စိုးရိမ်နေတာလား။
အိတုံရဲ့ စေတနာကို လေးစားနေချိန်မှာ
ဘုန်းကျော်ဆိုတဲ့ အဝေးကလူက စော်ကားတယ်
အောင်ကိုလတ်က ပြောခဲ့ ဆိုခဲ့ဘူးတယ် .. ဘယ်ကိုရောက်နေ မင်းမြဲမြဲမှတ်ပါ မင်းမြန်မာ တဲ့
ဘုန်းကျော်က မြန်မာ မဟုတ်သလိုပဲ
(ဥပမာ အဆိုတော်လေးဖြူက နာယကပါဆိုပြီးလုပ်ပေါ့။ ဥပမာ လူထု ဦးစိန်ဝင်း။ အိတုံက နာမည်ကြီး လူလေးစားရတဲ့လူမှ မဟုတ်တော့ ဘယ်သူက ယုံမှာတုန်း။)
အခုအလှူလုပ်တာက မန်းလေးဂေဇက်က လူတွေစုလုပ်တာဗျာ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရွာထဲကလူ လုပ်တာ ကိုယ်ဝိုင်းပါမယ်။
အဲတော့ ဒီကိစ္စကို ပြောမယ်ဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ဆက်လိုက်ပြောပြမယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မန်ဘာဝင်ထားရုံလောက်သာရှိပြီး စာလဲမရေး ကွန်မင့်လဲ မရေးသလောက်နီးပါးပါ။ အပြင်လူသက်သက်လို့ ဆိုရမလိုပါ။
ဒီအလှူက ကိုယ်နဲ့တခါမှမသိတဲ့လူတွေ လှူချင်လာအောင်စည်းရုံးပြီး လှူတဲ့အလှူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ကလောင်မှတဆင့် online မှတဆင့် ခင်မင်ရာ သိကျွမ်းရာတွေစုပြီးအလှူလုပ်တဲ့ မိသားစုအလှူမျိုးမှာ အခြားသူတွေလဲ “ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် ပါဝင်ချင်ရင် ပါဝင်နိုင်ကြောင်း” ကြေညာထားရုံသက်သက်ပါ။ အချင်းချင်း ယုံတဲ့လူတွေ စုလှူတဲ့ကိစ္စ မယုံရင်မပါရုံသာရှိပါတယ်။ ဆရာကြီးဝင်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
Etone ဟာ ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင် သမီးအရွယ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စာတွေဖတ်ရင်းကတဆင့် သူ့စိတ်ကိုဖတ်မိတဲ့အတွက် ယုံကြည်လေးစားပြီးသားပါ။ သူ့ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်မှု့ဟာ အဆိုတော်လေးဖြူထက်ရော၊ လူထုဦးစိန်ဝင်းထက်ရော မလျော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်မျိုးရှိသူတွေ MG အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော MG ပရိတ်သတ်ထဲမှာရော အများကြီးရှိမှာပါ။
Etone ကို နာမည်ကြီးသူမဟုတ်ဆိုရင် လက်ခံပါတယ်။ လူလေးစားရသူမဟုတ်ဆိုတာကတော့ တိုက်ရိုက်အားဖြင့် သူ့ကိုစော်ကားလိုက်တာဖြစ်သလို သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် MG တဖွဲ့လုံးကို စော်ကားလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီဆိုက်က တခြားပေါက်ပန်းဈေးဆိုက်တွေလို တွေ့ကရာကောင်တွေ ထင်ရာလျှောက်ရေး လျှောက်ဆဲတဲ့ ဆိုက်မျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တောင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလေး နဲနဲရေးချင်ပေမယ့် ဆိုက်ထိခိုက်မှာစိုးလို့ မန်ဘာသက်တမ်းတနှစ်ကျော်တဲ့အထိ ဘာမှမရေးပဲ စောင့်စည်းနေပါတယ်။ ပြောချင်တာက ဒီဆိုက်က လူကောင်းတွေ လေးစားအလေးထားတဲ့ဆိုက်ပါ။ ဒီဆိုက်ထဲမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အကျိုးပြုစာတွေ ရေးနေသူတွေဟာလဲ လူကောင်းတွေ အလေးထား လေးစားတဲ့စာရေးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုယ်က ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေတာဆိုတော့ အလုပ်ဖြစ်အောင် ဒိထက်ပိုပြီးအောင်မြင်လာအောင်” ဆိုရင် –
နေရာတကာ ဆောင့်ကြွားကြွားနဲ့ ဘယ်သူမှဆရာမတင်ပဲ ဆရာကြီးဝင်လုပ်တတ်တဲ့ လူ့ဂလန့် ဖျက်မြင်းတွေ မပါဘို့လိုပါတယ်။
သူတို့ကတော့ အများအလှူဆိုတော့ကာ မပါနဲ့လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု့ရှိသူတွေကိုး။
ကျွန်တော်ကတော့ အပြင်လူဆိုတော့ – ဒီနေရာကပဲ ကိုဘုန်းကျော်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ခင်ဗျားလှူချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာပဲ ကြိုက်တဲ့နေရာ သွားလှူပါဗျာ။ သူတို့ကို သွားမနှောက်ယှက်ပါနဲ့။
ဒီလူလေးတွေစုမိဘို့ ဒီအလှူလေးဖြစ်မြောက်ဘို့ လွန်ခဲ့တဲ့ လပေါင်းများစွာကတည်းက ၀ိုင်းပြော ၀ိုင်းဆွေးနွေး ၀ိုင်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာ ။ အခုမှ စရုံတင် စဖြစ်သေးတာပါ။ ခင်ဗျားလိုလူတွေကြောင့် သူတို့ အရှိန်ပျက် စိတ်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။
မှားနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။လွဲနေတာပါ။ လွဲတာဆိုတာကလည်း သူ့ အယူအဆ ကိုယ့်အယူအဆလွဲနေတာပါ။ ကျနော်မှန်တယ်လို့လည်း မပြောချင်ဘူး။ ဖျက်မျဉ်းလည်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုတော့ ပြောချင်တယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ စုစုစည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ်မဖြစ်တာက အခုကိစ္စမှာတင်ပေါ်နေပြီ။ ရအောင်ညှိလို့ ရရမယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကို အားလုံးလုပ်နေကြတာပဲ။ မလှူနဲ့ တခြားမှာ သွားလှူပါ။ နာမည်ကြီးစရာမလိုဘူး။ ဂေဇတ်ကလုပ်တာဆိုတော့ ဂေဇတ်နဲ့ တင် ရတယ်ဆိုတာတွေက မရဘူး မဟုတ်ဘူး၊ လုံးဝရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီစကားက မြန်မာလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့ လက်လွတ်စပယ်ပြောနေတဲ့ စကားပါ။ တကယ်လို့ တာဝန်ယူချင်တဲ့စိတ်ရှိရင် ဒီလိုစကားကို မပြောရဘူး။ အရမ်းကို အောင်မြင်တဲ့စုပေါင်းအလှူဖြစ်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား။ ပိုကောင်းအောင် ပိုပြီးအောင်မြင်လာအောင် လူတွေယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဖို့ တာဝန်မရှိဘူးလား။ ဒီအလှူက တစ်ခါတည်းနဲ့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ အိတုံပြောအရ ဆက်ပြီး လုပ်အုံးမှာပါ။
အင်တာနက်ကနေ စာလေးလေးငါးကြောင်းကောက်ပြီးရေးတာ ၊ အလှူခံတာလွယ်တယ်။ ဒါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲက ခက်တယ်။ဒါကို သဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်။
အလှူခံမယ်။ ပြီးရင် လှူတဲ့ လူတွေရဲ့ နာမည်ကို အင်တာနက်မှာဖော်ပြမယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်။ ဒါနဲ့ ယုံကြည်မှုရတယ်ထင်ပြီလား။
သူဌေးတွေတောင် လစ်ရင်လစ်သလို ဘတ်သေးတာပဲ။ အိတုံတို့ အဖွဲ့ ကို သူခိုးလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် စဉ်းစားဖို့ ကို တင်ပြနေတာပါ။ မဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းလည်း မရှိဘူး။ မယုံရင် လူထုဦးစိန်ဝင်းအိမ်ကို သွားပြီး သူ့ ဆီက အကူအညီတောင်းကြည့်ပါ။ သူပါလာရင် အလှူငွေက ဒိထက်ပိုပြီးများလာမယ်။ ဘဘရယ် နာမည်လေးပဲ ခံပေးပါလို့ ပြောကြည့်။ သူ့ကိုလူအများက လေးစားတယ်။ လူအများအပြားသိတယ်။ အလှူငွေများများရရင် ဆင်းရဲတဲ့လူတွေပိုပြီး ရမယ်။ အလှူငွေများများရဖို့ မလုပ်သင့်ဘူးလား။ လုပ်သင့်တယ်ဆိုရင် ကျနော်အကြံပေးတဲ့ဟာကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ငြင်းနေဖို့ လိုသေးလား။
ဒါ့ကြောင့် လူကြီးတွေမှာ ပိုပြီးတာဝန်ရှိတယ်။
ဒီရွာထဲမှာ ကျနော်က လူသစ်ပါ။ နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တစ်ဦးပါ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးကို အမြတ်ထုတ်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လည်း ဘာကောင်မှ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အတွေ့ အကြုံ နဲ့ ဗဟုသုတ အတွေးအမြင်ကို ရှယ်ပေးတယ်။
ကိုယ်က သြစတျေးလျမှာနေတယ်။ ဒီနိုင်ငံက ရလာတဲ့အတွေ့ အကြုံကိုလည်း မြန်မာပြည်က လူတွေကို ရစေချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်ပြောတာကို သဘောပေါက်စေချင်တယ်။ မပေါက်လဲနေပါ။ နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေက ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်နဲ့ အုံး။ ကိုယ်လည်း တက်နိုင်သလောက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ကူပေးတာပါ။ ဒီလိုပဲသဘောထားစေချင်တယ်။ နဲနဲလေးပြောလိုက်တာနဲ့ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် ကန်ထုတ်တဲ့အကျင့်ကို မရှိစေချင်ဘူးဗျာ။ ရင်ဘတ်နဲ့ အလုပ်မလုပ်ကြစေချင်ဘူး။ ခေါင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ ထိရောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ပခုံးနှစ်ဘက်ကြားမှာ ခေါင်းပေါက်တိုင်း လူလို့ခေါ်တာ မဟုတ်ကြောင်း … လက်တွေ့သိသွားပြီ ။
ဘာမှ မပြောတော့ဘူး …
လစ်ရင်လစ်သလိုက ရှင်ပဲလုပ်။ သူများတွေမလုပ်ဘူး။
မြန်မာပြည်က လူငယ်လေးတွေကော လူကြီးလေးတွေကော တော်ကြပါတယ်။ ကောင်းကြပါတယ်။ အမြင်ကျယ်ပါတယ်။ လှူချင်တန်းချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လည်း ကောင်းပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ဗျာလို့ ပြောရင် သဘောကြလား။
HA HA HA HA HA HA ရယ်ရလွန်းလို့ အူတွေတောင်နာလာပြီ … ။
နည်းနည်းနောနောတောင်မဟုတ်ဘူး .. ပေါရဲလွန်းလိုက်တာ … ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ… ခင်ဗျား ဘာရေးရေး ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရေးရေး ကျုပ်ခင်ဗျားကို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ခင်မင်စွာ အကြံပေးခဲ့ဘူး/ပေးနေဆဲပါ.. ခင်ဗျားပြောချင်တာနဲ့ ပြောထွက်သွားတာနဲ့ က တခြားစီဖြစ်နေတယ်.. အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလိုပေါ့ဗျာ.. အခုဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ အိတုံရဲ့ သိက္ခာတရားကို အရမ်းထိပါးစေပါတယ်.. ခင်ဗျားအနေနဲ့ တခြားသူတွေအပေါ်အလိမ်ခံရမှာစိုးတဲ့ စေတနာနဲ့ ပြောပေမယ့် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အများကောင်းကျိုးအတွက်ကူညီပေးနေတဲ့ အိတုံအတွက်တော့ သူ့ သိက္ခာနဲ့ မာနကို အစော်ကားခံလိုက်ရတာဘဲ.. ပြောသင့်တာက ဒီလိုငွေတွေကိုလှူရင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ်၊ ဘယ်လိုစီမံခန့် ခွဲမယ်၊ ဘယ်တွေကို ဘယ်ရက်တွေမှာလှူမယ်ဆိုတဲ့ အစီစဉ်လေးကို သိချင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင်လုံလောက်နေပြီ.. ခင်ဗျားပြောတဲ့ လေးဖြူတို့လူထုစိန်ဝင်းတို့ မှခင်ဗျားက လေးစားမှာလား.. နာမည်မကြီးတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အဖေအရင်းကိုယ်တိုင် ကမကထလုပ်ရင်ကော ခင်ဗျားမယုံကြည်တော့ဘူးလား(ဥပမာပြောတာနော)..
ခင်ဗျားပြောတာက သူဌေးတောင်မယုံရဘူးတဲ့.. ဟုတ်တယ် ကိုဘုန်းကျော်.. ဒါပေမယ့် လူတိုင်း နေရာတိုင်းမှာတော့ မဟုတ်ဘူး.. တချို့ သူဌေးပိုက်ဆံအိတ်ကောက်ရလို့ပိုင်ရှင်ကိုပြန်မပေးပေမယ့် တချို့ တချို့ သော သာမန်လူတန်းစားတွေမှာ “သြော်.. ပိုင်ရှင်တော့ အရမ်းပူပန်သောကရောက်နေမှာဘဲလေဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ” ပြန်ပေးတတ်ကြတာကို ခင်ဗျားလူဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်မှာ ရံဖန်ရံခါကြုံဖူးမှာပါ.. ခင်ဗျားပို့ စ်တွေကလေ တစ်ခါတရံလောက်ဘဲ အကျိုးပြုစေတယ်.. ပြောတုန်းခဏဘဲ.. ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်သလိုမျိုးပေါ့..
နောက်တစ်ခုက အိတုံနေရာမှာ ငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တင်လိုက်တဲ့ပို့ စ်လားလို့ ကျုပ်တောင်ခင်ဗျားကိုသံသယဖြစ်မိတယ်.. ((((((((((လူလိမ္မာသားပီပီ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဖြစ်စေ့ချင်တယ်ဗျာ…)))))))))))))))
@@ထပ်လောင်းအကြံပြုလိုတာက ခင်ဗျား အိတုံကို တရားဝင်တောင်းပန်စေချင်တယ်@@
ဒါ ဒီပို့စ်မှာ နောက်ဆုံးပေးတဲ့ ကွန်းမန့်ပါဗျာ။
ကျွန်တော် စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်ဘူးတယ်ဗျ။
အမှန်ပြောပေမယ့် အပြောမှန်ဘို့လိုတယ် ဆိုတာလေးပါ။
ခင်ဗျားက မှန်တယ်ထင်ရင် ဇွတ်တင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်လို့
ကျွန်တော် ၀င်ပြောနေတာက ခင်ဗျားနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ အဆင်ပြေပြေ လေး
သူတို့လို လူငယ်လေးတွေရဲ့ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်လှူချင်တန်းချင် တဲ့ စိတ်ကလေးကို
စာရင်းနဲ့ ဇယားနဲ့ စံနစ်တကျ ဖြစ်အောင် သူတို့လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ယုံတယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း မန်ဘာဝင်ထားပေမယ့် စာဖတ်သူသက်သက်ပါ။ကိုဘုန်းကျော်ရေးတာတွေကိုလည်း ဖတ်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်သိချင်တာက ဖန်ခွက်ထဲက ရေတစ်ခွက်ကို ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာပါ။
ရှိပြီးသားတစ်ဝက်ကို အကျိုးရှိအောင် သုံးမလား?
ဒါမှမဟုတ် တစ်ဝက်ပဲရှိတယ် မြင်ရင်လည်း မရှိတဲ့တစ်ဝက် ကို ဘယ်လိုဖြည့်မယ်စိတ်ကူးထားလည်း?
ကိုဘုန်းကျော် လက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ (ဝါ)ကျန်နေသေးတဲ့ရေတွေ ကို ဖြည့်ပေး
ဝိုင်းပြီးဆော်လိုက်တာ ဘုန်းကျော်တစ်ယောက် ခေါင်းကို ကျိန်းထွက်သွားတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကလဲပြော။ ကျနော်ကလည်းပြောပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်ဘူးလား။ လေထိုးလေရော်ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ အုပ်စုတောင့်တာကိုးဗျ။ ဟဲ…ဟဲ။
ရွာထဲ.. တုံမမကို အထင်တော့မသေးပါနဲ့..။သူက.. ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေသူပါ..။
စာရင်းနဲ့အင်းနဲ့.. ကျုပ်ဆီမှာအကုန်ရှိပါတယ်..။ စလုပ်တော့.. အလှူငွေ အ၀င်အထွက်အတိအကျ ပေးနေပါတယ်..။ ဘာမှတောင်းလည်းမတောင်း.. မေးလည်းမမေးရပါဘူး.။ သူ့သဘောနဲ့သူကို ပို့နေတာပါ..။
ကိုကျော်သူကလည်း မန္တလေးဂေဇက်နာမယ် ကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မယ်.။
အခုတလောက.. ပြသနာတချို့ရှိတယ်..။ အဓိကက.. နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားတွေကိစ္စမှာပါ…
.. ကိုဇာဂနာပြောလိုက်တာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. အပြင်ရောက် ငွေလှူနေသူတွေမှာ ခံစားချက်တခုဖြစ်တယ်..။ ဘာလဲဆိုတော့.. နိုင်ငံခြားကနေ.. လှူတဲ့သူတွေက.. စာရင်းမတောင်းပဲ.. စွတ်လှူနေတာ… ခုလပိုင်းမှ.. ကိုဇာဂနာက.. အထဲကသူတွေများ.. ငါးခြောက်တဖတ်တောင်မရဘူးထပြောတော့.. “ဟာ”ကနဲ့.. ခံလိုက်ရတယ် ဖြစ်နေတာပေါ့…
အဲဒီခံစားချက်ကို .. ဒီမှာလာ… ရင်ဖွင့်တယ်ပဲမှတ်ပါ…။
ကိုရင်ဘုန်းကျော် ငွေကို စိတ်ချလက်ချ ပို့လှူနိုင်ပါတယ်..။
အဲဒီငွေ စရိတ်တပြားမှမပွန်းပဲ.. လှူကြတဲ့ဆီ အပြည့်တန်းရောက်သွားမယ် အာမခံပါတယ်.။
သိတဲ့အတိုင်း.. မြန်မာပြည်က.. အခွန်ဆောင်တာတွေ..အခွန်ငွေစည်းကြပ်တာတွေ လုပ်ထုံးနည်းလမ်း.. မဖွံ့ ဖြိုးသေးတော့.. လှူတဲ့ငွေရဲ့.. လက်ခံဖြတ်ပိုင်း ပေးမယ်မထင်ပါဘူး..
အဲဒါမရလို့.. သြစီမှာ တက်စ်(အခွန်) ပြန်လျှော့ချင်တယ်..ကလိန်းလုပ်လို့တော့ မရပါဘူး..။
စိတ်ထဲပြတ်ရင်တော့.. ငွေလှူပြီး..စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ….မြေတောင်မြှောက်တဲ့အနေနဲ့.. စွတ်စွဲသလို သက်ရောက်သွားတဲ့.. အရေးအသားအပေါ် တောင်းပန်ရင်း… အားပေးလိုက်စေချင်ပါတယ်..။
ရှိတဲ့.. အကြံဥာဏ်တချို့.. ဖြည်းဖြည်းချင်း (အပြုသဘောနဲ့) ပေးစေချင်ပါတယ်.။
(ဖြစ်နိုင်ရင် စဉ်းစားဖို့ ကို တင်ပြနေတာပါ။ မဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းလည်း မရှိဘူး။ မယုံရင် လူထုဦးစိန်ဝင်းအိမ်ကို သွားပြီး သူ့ ဆီက အကူအညီတောင်းကြည့်ပါ။ သူပါလာရင် အလှူငွေက ဒိထက်ပိုပြီးများလာမယ်။ ဘဘရယ် နာမည်လေးပဲ ခံပေးပါလို့ ပြောကြည့်။ သူ့ကိုလူအများက လေးစားတယ်။ လူအများအပြားသိတယ်။ အလှူငွေများများရရင် ဆင်းရဲတဲ့လူတွေပိုပြီး ရမယ်။ အလှူငွေများများရဖို့ မလုပ်သင့်ဘူးလား။ လုပ်သင့်တယ်ဆိုရင် ကျနော်အကြံပေးတဲ့ဟာကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ငြင်းနေဖို့ လိုသေးလား။)
ဒါကိုဖတ်မိတော့ နာမယ်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေက ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကြိုးစားမကြည့်ရတော့ဘူးလား။
နောက်အခုလုပ်နေတာက ဒီမန်းလေးဂေဇက်မှာရှိတဲ့သူတွေ နိုင်သလောက်လေးကြိုးစားလို့စုပြီးလှူချင်တာ
ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ရတယ် ဘယ်သူလှူတယ်ဆိုတာကို စာရင်းအင်းအတိအကျနဲ့တင်ပြနေတယ်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အခုနာမယ်ခံပြီးအလှူခံပေးနေတဲ့သူတွေက လူချမ်းသာတွေမဟုတ်သလို
လာလှူတဲ့ငွေတွေကို လိမ်မှာမဟုတ်တာကတော့ လုံးဝကို သေချာပါတယ်။
အရှင်းဆုံးပြောရရင် ကိုယ့်အင်အား ကိုယ့် ၀ိရိယ ကို အားကိုးပြီးလုပ်ကြည့်တာပါ။
ဘယ်နာမယ်ကြီးသူရဲ့ အရိပ်အောက်ကိုမှဝင်ပြီး အကူအညီမယူချင်လို့ ကိုယ်နိုင်သလောက်လုပ်တာပါ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ဒီရွာက အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အခုလိုပြောနေတယ်လို့ထင်နေပုံရပါတယ်
အမှန်က ရွာကလူတွေ လူဟောင်း လူသစ် ခွဲခြားပြီး မဆက်ဆံတက်ကြပါဘူး ။ အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ပါပဲ။ အခုလိုလည်း လူတိုင်းက လိုက်မပြောနေတက်ကြပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် အခုဟာက ဘယ်သူမှားနေတယ် မှန်နေတယ်ဆိုတာ အရမ်းးကို သိသာနေပါတယ်
ကိုယ်ကမှန်တယ်လို့ထင်နေပင်မယ့် အများအမြင်မှာတော့ တော်တော်လေးကို မှားယွင်းနေပါတယ်
အပြောမတက်တော့ ဆဲသလိုဆိုတာမျိုးဆိုသလိုပေါ့ စိတ်ရင်းအမှန်က ဘယ်လိုရှိမလဲတော့ မသိပင်မဲ့
အခု ကိုဘုန်းကျော်ပြောပုံမျိုးက ဒီအလှူကို ဟန့်တားနေပုံပါပဲ ..နောက် လူသိရှင်ကြား ဒီလိုကြီးထုတ်ပြောလိုက်တာလည်း ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေသူတွေကို စော်ကားသလိုဖြစ်နေပါတယ် ….
ကိုဘုန်းကျော် – လူဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွေးအခေါ် အယူအဆ ကျင့်ကြံနေထိုင် ပုံခြင်း မတူ ကြတာ သိမှာပါ။ တစ်မိတစ်ဘ ထဲက မွေးတဲ့ လူခြင်းတောင် စိတ်ချင်းမတူ ကြတာရှိနိုင်ကြပါဘူး။ တစ်မိတစ်ဘ ထဲကမဟုတ် ပေမဲ့လဲ စိတ်ချင်းတူနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်က ကိုယ့်စိတ် သူ့စိတ် ထပ်တူမှလဲ ရင်းနှီးခင်မင်နိုင် တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို ဘဲ မတူတာကို ညှိရင်း နှိုင်းရင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်း နဲ့ဘဲ မောင်ရင်းနှစ်မ တွေလို ခင်မင်တတ်ကြပါတယ်
ကိုဘုန်းကျော် ပြောတဲ့ အခု အလှူကိစ္စ မှာ ကျွန်မ သာဆိုရင် “လူထုဦးစိန်ဝင်း” ဆီမှာ လှူမှာထက် “အိတုန်း” ဆီမှာ လှူပါမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ဒီရွာထဲ မှာ စကားတွေ ပြောရင်း သူ့စာ တွေဖတ်ရင်း သူ့စိတ်ကို သိနေလို့ပါ။
လူတစ်ယောက် ကို ယုံသင့်/မသင့် ချင့်ချိန် တတ်တဲ့ စိတ် ရှိရင် ဒီလူ ဟာ ငါ့ကို ညာမှာ ဘဲ လို့ တွေးပြီး သံသယ ပွါးစရာ မလိုပါဘူး။ ရွာထဲ မှာ နာမည် ဘဲ ရှိပြီး လူမရှိ တဲ့ လူ တွေ လဲ အများကြီးလို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာထဲ ကနေပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကို တိုးတက်စေချင်၊ ဆင်းရဲတွင်း ကပြည်သူတွေ ကို တတ်နိုင်သ၍ ဖေးမချင် တဲ့ လူတွေ လဲ အများကြီးပါ။ လောက ကြီးမှာ အရာတွေဟာ တူရာ စုတတ်တဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။
ကို ဘုန်းကျော်ရေ – အိတုန်း ရေးထား ဘူးတဲ့ Post လေးတွေကို အရင်ဖတ်လိုက်ပါဦး။
ကျွန်မ ကတော့ သူရေးထားတာလေး တွေ ကို ဖတ်ပြီး သူ့ဆေးခန်းလေးက လူတွေကိုတောင် လှူချင် နေတာပါ။ ကျွန်မ မချမ်းသာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ချွေးနဲစာ နဲ့ လှူတာ ကို တော့ ပိုနေ လျှံနေတဲ့ နေရာတွေထက် လူသူမသိလို့ မရ တဲ့လူ တွေကို ပိုလှူချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်နာမည်ကြီး လူ က လုပ်မှ လှူမယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
စကားမစပ်- ဆရာသစ် ရဲ့ Post မှာ ကျွန်မ ဆွေးနွေးခဲ့ ဘူးတဲ့တာလေး ကို ကြုံတုန်း မျှပါရ စေ။ အဲဒီ ပုံပြင်က ကိုဘုန်းကျော် ဖတ်သင့်တယ် ထင်လို့ပါ။
PS – လူတိုင်း အမြင်ကွဲ နိုင်လို့ ဒါဟာ တော့ ကျွန်မ အမြင်ပါဘဲ ကိုဘုန်းကျော်ရေ။
ကျွန်မ လဲ လူသစ်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ရွာထဲ က လူတွေရဲ့ စာတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးမှ ရွာထဲကို ဝင်လာတာပါ။ ကိုယ်မကြိုက် တဲ့ နေရာ ဆို အချိန်ကုန်ခံပြီး လာစကား ပြောနေစရာ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား။
ကျွန်မတို့ အားလုံး စေတနာ နဲ့ ပြောခဲ့ တာတွေကို ကိုဘုန်းကျော် နားလည်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။ :-)
(ဝိုင်းပြီးဆော်လိုက်တာ ဘုန်းကျော်တစ်ယောက် ခေါင်းကို ကျိန်းထွက်သွားတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကလဲပြော။ ကျနော်ကလည်းပြောပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်ဘူးလား။ လေထိုးလေရော်ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ အုပ်စုတောင့်တာကိုးဗျ။ ဟဲ…ဟဲ။)
မှားနေပြီ ကိုဖုန်းကျော် ခင်ဗျားတင်ပြတဲ့အယူအဆကို ပြန်ပြီးချေပတာ ၀ိုင်းဆော်တာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ဘက်ကနေ အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာနဲ့ ငြင်းပိုင်ခွင့် ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
အဲတော့ ခင်ဗျားလဲ အချက်ကျကျနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးပေါ့။
ခင်ဗျားရေးတာ သူများလက်ခံရင် သဘာဝကျရင် ဖြစ်နိုင်ရင် ခင်ဗျားဘက်ရောက်လာမှာအတိအကျဘဲလေ။
(ခင်ဗျားတို့ အုပ်စုတောင့်တာကိုးဗျ။ ဟဲ…ဟဲ။)
အောက်ကသတင်းကို.. ရွာသူားတွေ အသိပေးစေလိုတဲ့ စိတ်နဲ့.. ကူးတင်ပါတယ်..။
အဲဒီငွေတွေက.. အထင်မမှားရင်.. သိန်းသန်းချီလောက်ပါလိမ့်မယ်..။
ဒီလိုပြောလို့.. လှူသူရော..အလှူခံသူများရော.. လုပ်ပေးနေသူများရော ကို.. အပြစ်ဖို့တာမဟုတ်ရပါ..။
ဘာမှမလုပ်ပဲ..ထိုင်နေတာထက်တော့ ..မွန်မြတ်ကြတယ်လို့.. ခံယူပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့.. နည်းနည်းချင်း..ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရင်း လုပ်သွားကြ..ပြင်သွားကြရမယ်ပေါ့..။
တခုသိထားစေချင်တာက.. တရားဝင်ထောင်ထားတဲ့.. အန်ဂျီအို၊အန်ပီအိုတွေအလုပ်ကိုပါ..။
အဲဒါတွေက.. သာမန်အားဖြင့် အလှူငွေအားလုံးရဲ့.. ၇၀-၈၀လောက်ကို စရိတ်အဆင့်ဆင့်အတွက် ကျခံဖယ်ပြီးမှ.. အလှူလက်ခံရသူတွေဆီ.. ၃၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်တာပါ..။
ရက်ခရောစ့်တို့..၊ ၀ါ့လ်ဗစ်ရှင်းတို့လည်း.. ၃၀ရာခိုင်နှုန်းတောင် အနိုင်နိုင်တွေပါ..။
ဒါတွေကလည်း… မွန်မြတ်ပြီး.. တရားမျှတတဲ့.. လူမှုရေးအလုပ်တွေပါပဲနော.။
ကျွန်တော် ခင်ဗျားရေးသမျှအားလုံး ဘာမှဝင်မပြောဘူး…ထိုင်ကြည့်နေတာကြာပြီကွယ်…
ဒါပေမယ့် အလှူလှူတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်မှာလှူလိုက်တယ်…
အလှူခံတဲ့လူက အရက်ပဲသောက်သောက်၊ ဖဲပဲရိုက်ရိုက် အဲဒါသူ့ကိစ္စ၊ သူ့သမိုင်း
ခင်ဗျားရင်ထဲမှာ လှူတယ်လို့ရည်စူးတဲ့အတွက် အဲဒီအလှူအထမြောက်သွားပြီ…
ကျုပ်သိတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့အလှူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်…
အဲဒီတော့ ရှင်းတယ်၊ လှူချင်လို့လှူလိုက်တယ်..
ကျုပ်လှူလိုက်တယ်…စေတနာရှိလို့လှူတယ်၊ သဒ္ဓါလို့လှူတယ်…ကျုပ်ဖက်က တာဝန်ကျေပြီ…
ဒီအလှူဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်မယ့်လူတွေ သူ့တာဝန်အတိုင်း ကျေအောင်လုပ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်…
မလုပ်ရင် ခင်ဗျားပြောသလို ခိုးရင်…သူ့သမိုင်း…
အဲဒီ အင်ဂျီအိုတွေရဲ့ အလှူက ဘယ်သူ့ဆီကိုဘယ်လိုရောက်မှန်းမသိ ပေါ်တင်လှူကြတာမှာမဟုတ်တာဗျာ။
အခုရွာကလူတွေလုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေက ငွေကောက်ခံတာကူပါမယ်လို့ အတိအကျညွှန်းပြီးရေးထားတာကိုးဗျ။
လူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရွာထဲကစာကို ဖတ်မိသူများကို သာရည်ညွှန်းတာပါ။
အခုအလှူငွေလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ကျနော်တို့တစ်တွေက နာမယ်ပျက်နေတဲ့သူခိုးတွေ သူများဆီကလက်ဖြန့်ခံနေသူတွေ သူများကျွေးတာစားနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။
သူများအထောက်အပံ့နဲ့ရပ်တည်ပြီး ဒီရလာမယ့် အလှူငွေကို ကော်မရှင်စားနဲ့နုတ်ယူမယ့်သူလဲတစ်ယောက်မှမပါဘူး။
အိတုန်ရေဘယ်သူဘာပြောပြောလုပ်စရာရှိတာရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ပါ။ အားပေးနေပါတယ်။ လှုစရာလဲဒို့တွေလှုမှာပါ။ အနားနီးရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။ ကိုဘုန်းကျော်အကြောင်းလဲသိနေတာပဲ။ သူကဖွရမယ်ဆိုလာထား။ လွှတ်ထားလိုက်ပါ။ သူကဘာလဲတော့ မသိပေမဲ့သိပ်တော့အဆင်မပြေဘူး။ အပြင်မှာစကားပြောရရင်တော့ကောက် ရိုက်မိမလားပဲ။ သူ့လုပ်ငန်းခွင် မှာတော့ဘယ်လိုဆက်ဆံနေလဲမသိဘူး။ ဒီအတိုင်းဆိုလူရိုက်ပေါက်ပဲ။ ကိုဘုန်းကျော်ရေ။ မြို့မေတ္တာခံယူနေ တာလား။ ကြည့်နေကြည့်စားပါ။ ၀င်ဝင်ပြီးဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့။
လူထုစိန်ဝင်းလို လေးဖြူလို မြန်မာမကျော်ပေမယ့်
လူမသိအောင်အမည်ဝှက်တွေနဲ့ရေးနေကြတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မှာ ဆက်သွယ်စရာဖုန်းနံပါတ်ကို
လေးစားပါတယ် အိတုံ အားပေးကူညီရန်အသင့်ရှိပါကြောင်း(အပြောသက်သက် ) မဟုတ်ပါ
အင်း…ဒီလူနဲ့တော့ ခက်နေပါပြီ၊ လူတိုင်းကိုတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့မနှိုင်းနဲ့ပေါ့…၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အထင်ကြီး ဘ၀င်စိတ်နဲ့တွေး၊ရေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလှမ်းဝေးနေအုံးမှာပါပဲ… လက်တွဲခေါ်ယူတယ်ဆိုတာလည်း ကမ်းလာတဲ့ လက်ရဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတယ်လို့ထင်ပါတယ်…စေတနာမှန်ဆိုရင် စေတနာမှန်မှန်း လူသိအောင်ချပြတတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်…
ကျွန်မတို့ အလှူက အိပ်စိုက် ဖုန်းစိုက် စားရိတ်စိုက် အချိန်စိုက်ပြီး
ရွာ့အလှူဖြစ်စေချင်လို့ စုပေါင်းအားကိုပြချင်လို့ လုပ်ကြတာပါ။
ဒီ post ကို ရေးတဲ့သူရော ဖတ်မိတဲ့သူတွေရော သံသယ မ၀င်စေလိုပါ။
ကျွန်မတို့က အိတုန်၊AKKO၊ ရွှေတိုက်စိုး၊ကိုပေါက် နဲ့တကွ နာရေး အသင်းကြီးကိုပါ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အလှူထည့်လိုက်ပါတယ်။
E Tone နှင့် ကိုဘုန်းကျော်ရေ
အဘ ” အဆဲခံခြင်လို့ကိုရေးတယ် ( ၄ ) ” မှာ
နည်းနည်း တို့ထိထားတယ် ။
ဘုန်းကျော် တော့ ကုန်းကာ မှ ပေါ်ပြီ၊
ကျွန်တော့သဘောကတော့ အခုဂေဇက်ကလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အလှူနဲ့ အပေါ်ကထောက်ပံ့ပေးမှု့ နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး…နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလို့လဲမရပါဘူး…
မြန်မာပြည်တွင်းကထောင်တွေမှာကျခံနေရ တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုတာတော်တော် ကျယ်ပျံ့ပါတယ်
နေရာကလဲအနှံ့…လူတွေကလဲအများကြီး….နိုင်ငံခြားကအလှူငွေ ကိုပြည်တွင်းကလက်ခံ တဲ့လူကလဲဘယ်သူမှန်းမသိ….ဆိုတော့ကာ အတော်ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ ကိစ်စပါ…ထားလိုက်ပါလေ…
အခု etone အော်ဂနိုက်ဇ် လုပ်တဲ့အလှူ က ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပါ…
တဲ့ နာရေးကူညီမှု့အသင်း..ပြီးတော့ ပိုက်ဆံလာလှူတာလား..အဲဒီစားပွဲပေါ်တင်ထားခဲ့လေ..ဆိုပီးလက်လွတ်စပပယ် လက်ခံနေတဲ့ အသင်း
ဂေဇက်အဖွဲ့သားများ အနေနဲ့ မလိုတမာပြောစကားများကို လစ်လျူ ရှု့ ပြီး ဆက်လုပ်ကြပါလို့အာပေးပါတယ်…
အကောင်းလုပ်တဲ့ ကိစ္စကို သင်းကြောင့်တော့ မပျက်စေနဲ့ ဒေါက်တာတို့ရေ
နောက်တခုက ကျွန်တော်ဆို သိပ် ဥာဏ်မမှီရင် ဒီစကားတွေကို ဥပက္ခောပြုထားတတ်ပါတယ်